Qorannoon Uumama Samii fi Lubbuu Boqonnaa Haarawa Seene - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Qorannoon Uumama Samii fi Lubbuu Boqonnaa Haarawa Seene
Sadaasaa 12, 2014 seenaa guddatu hojjatame. Ilmi namaa yeroo jalqabatiif kometii ‘comet’ (wanta plaaneetii gadii aduu irra marmaaru) irra meeshaa qorannaa saayinsii Filee (Philae) jedhamtu kaayuu danda’eera. Dhaabbanni Qorannoo Samii Awrooppaa (European Space Agency) xayyaarra samii (space craft) Rozetaa jedhamtu gara kometii kan erge woggaa 10 dura. Rozetaan woggaa 10 boodaa, kilomeetira biliyoona 6.4 erga imalte, kometii 67P/Churyumov-Gerasimenko jedhamtu irra Filee keette.
Fileen yeroo sadi erga qaama komet tuqxee booda miilaan qajeelatti gadi dhaabatte. Garuu u’uttaaluun kuni bakka yaadame irraa kilomeetira 1 fagaattee akka quphattu isii taasise. Erga kometii irra geettee as hojii qorannoo saayinsii egalte. Suuraa fi odeeffannoo biraas ergite. Fileen qaama kometii hanga seentiimeetra 20 gadi qotuu dandeetteerti.
Wonti erga fileen miilaan gadi dhaabattee as rakkoo ykn gufuu ta’aa jiru waa’ee anniisaati. Kunis kan ta’uu danda’eef anniisaa aduuu gahaa argachuu dhabuu irraayi. Yaanni jalqaba ture fileen anniisaa aduu irraa argatti kan jedhu. Garuu Fileen lafa olka’aa jala takkaa dhooqa woyii keessa waan buuteef gaadidduun lafa sanii Fileen aduu akka hinarganne daangeera. Fileen guyyatti sa’aa 1.5 qofaaf aduun kan wolargitu. Kometii Fileen irra teette, 67P/Churyumov-Gerasimenko woggaa 6.5 isii gaafat marsaa naannawa aduu irratti gootu xumuruuf. Kana jechuun woggaa 6.5 booda jechuudha anniisaa aduu akka gaaritti argachu kan dandeettu Fileen. Hangasiif anniisaa qabdu qusachaa, guyyaatti sa’aa 1.5f aduu qaammachaa hojii qorannoo isii itti fufti.
Fileen kilograama 100 madaalti. Gatiin itti bahe ammoo biliyoona 1.5. Maaliidhaaf kun hundi dhngala’e? Kometonni iccittii uumama samii fi lubbuu qabu jedhanii amanu saayinsistoonni. Hanbaan uumama samii kometii irratti argama jedhanii dubbatus. Dhakaa fi cabbiin kometii irra jirus molokiyulotaa uumama samii, dachii fi lubbuuf sababa ta’e qabatanii tursiisuun isaanii hinolle shakkii jedhutu jira. Egaa iccitii kana bira gayuuf fedhii fi hawwii saayinsistoonni qabaniidha kan Filee Rosetatti fe’anii gara kometii 67P/Churyumov-Gerasimenko akka qajeelchan isaan kakaase. Milkii isaaniif hawwina.
Previous article Ronaaldoon Sadrkaa Ol’aanaa Irra Jiraachuu Isaa Ibse
Next articleGareen Biyya Islaamaa (ISIS) maallaqa isaa qopheessuuf murteeffate